newspeak | Zizawa's refuge
Posted by zizawa ⋅ 03/08/2009 ⋅4Comments
ဘာစိတ်ကူးပေါက်ပြီး အင်္ဂလိပ်စာ သင်နေပြန်တာတုန်းလို့ မထင်စေချင်ပါ။ သတင်းတွေ၊ သတင်းစာတွေမှာပါတဲ့ newspeak တွေအကြောင်းတွေးမိလို့ ရေးတာပါ။
newspeak ကို oxford အဘိဓာန်က newspeak .noun. ambiguous euphemistic language used in political propaganda
-Origin- the name of an artificial official language in George Orwell’s novel Nineteen Eighty-Four (1949)
ဒီစကားလုံးက နာမည်ကျော်စာရေးဆရာ ဂျော့အော်ဝဲရဲ့၁၉၈၄ ၀တ္ထု မှာအခြေခံပါတယ်။ အဲဒီဝတ္ထုထဲက စကားလုံးတွေကို newspeak အရေးအသားလို့ခေါ်ပြီး newspeak ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ အခြေခံအယူအဆကို အဲဒီဝတ္ထုထုတ်ပြီး ၁၉၄၉ကနေ အခုထိ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သုံးစွဲနေပါတယ်။
အများလက်ခံရခက်တဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ၊ အထူးသဖြင့် အစိုးရကို မျက်နှာပျက်စေမယ့် အသုံးအနှုန်းတွေကို လှလှပပအခေါ်အဝေါ်၊ လူလက်ခံမယ့်အခေါ်အဝေါ်မျိုးကို ပြောင်းပြီးခေါ်ရင် newspeak သုံးတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
အိုဘားမားသုံးသွားတဲ့ newspeak တွေထဲမှာ
A war on terror = overseas contingency operations
Captured people held at Guantanomo Bay = enemy combatants
Terrorist attack = man caused disasters
U.S.A. Patriot Act = terrorist surveillance program တွေပါပါတယ်။
အမည်းနဲ့ရေးထားတဲ့ စကားလုံးတွေကို ကြည့်ရင် ဘယ်ဘက်ကစကားလုံးတွေထက် ပိုပြီးလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိတာကို တွေ့ပါမယ်။
ဒီက UK border agency ကလည်း newspeak သုံးပါတယ်။ responsible regulation ဆို tighter control- ကျပ်တော့မယ်လို့ မှတ်ပေတော့။
တခါ စီးပွားပျက်ကပ် recession ဆိုတဲ့စကားလုံးကို သတင်းစာတွေထဲမှာ ပထမမသုံးပါဘူး။ economic stagnation တို့ protracted economic stagnation တို့ဆိုပြီး ရေးနေတာပါ။ နောက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ definition ထဲဝင်သွားပြီဆိုမှ မခေါ်မဖြစ်တော့မှ recession တို့ depression တို့ကို သုံးတာပါ။ သတ်မှတ်ထားတာက GDP က လေးလပတ်ကာလ ၂ခုဆက်တိုက် ကျသွားရင် recession တဲ့။
စီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့တခြားnewspeakတွေကတော့ monetary tightening ဆိုတာ interest rate မြှင့်တော့မယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်၊ reign in the stimulus package ဆိုတာကလဲ interest rate တက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲ။
ဒီနေ့ဗမာသတင်းစာတွေထဲမှာ newspeak ရှာကြည့်တော့ အမျိုးသားပညာရေးနှောင့်နှေးတဲ့။ ဆိုလိုတာက တနိုင်ငံလုံးပညာရေးတိုးတက်မှုမရှိပေါ့။
မကောင်းတာတွေကို ဖုံးချင်ရင် ပညာသားပါပါနဲ့ newspeak သုံးတတ်ပါတယ်။ အစိုးရတွေက လူထုဆီ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ သတင်းပုံစံ၊ အသုံးအနှုန်းနဲ့ အရေးအသားတွေ ပြုစုထုတ်ဝေပေးဖို့ မီဒီယာကလူတွေကို spin doctor တွေအဖြစ် လစာကောင်းကောင်းပေးပြီး ခန့်ထားလေ့ရှိပါတယ်။
ကိုယ်တို့တတွေကတော့ ကျင့်သားရလို့ ကြေးမုံတို့ မြန်မာ့အလင်းတို့ ကောက်ကိုင်လိုက်ရင် newspeak တွေ တန်းမြင်ပြီးသား မဟုတ်လား။
tag game »
Nice sis. Very very nice. Got much knowledge. Thxs.
Posted by Naw Shunn Lae | 04/08/2009, 09:20
ဗုသုတ တွေ ရသွားပြီ..ဆရာမ။း)
Rhetoric တွေက..ပိုများမယ်ထင်တယ်။ ( မိုးလုံးပြည့် မုသာဝါဒများ)း)) မသိမသာ ပြောတာမဟုတ်.. အသိအသာ ပြောတာလေ။
Posted by kaythwe | 04/08/2009, 14:52
Whata++good post! 🙂
Posted by You Know Who | 05/08/2009, 07:05
an interesting related website I came across
Posted by steve | 05/08/2009, 08:14